IziBonelelo eziPhezulu ze7 zeSemax omele ukwaziyo ngaphambi kokuSebenzisa-Phcoker
Kwelinye icala, kukho okwaneleyo okubhaliweyo okufunyenweyo malunga nendlela ichiza elinokunceda ngayo ekunciphiseni ixhala kunye nokuphucula imeko yeemvakalelo zomsebenzisi. I-Semax isetyenziswa njenge nootropic esemgangathweni, kodwa ikwanokusetyenziswa okongezelelekileyo njengokuphucula impilo yengqondo kunye nokwandisa amajoni omzimba phakathi kweminye imisebenzi. Izibonelelo ze-Semax zinokuziva kuphela xa ichiza lithathwa ngokuchanekileyo. Nangona kunjalo, qiniseka ukuba ufumana isikhokelo sokusetyenziswa kugqirha wakho ukufumana iziphumo ezingcono kunye namava.
Isemax (80714-61-0) ngamayeza e-peptide aqala ukwenziwa eRussia kwii-1980s ukunceda kunyango nakulawulo lweengxaki ezifana nokubetha. Namhlanje, ukuxhalaba kweSemax kudweliswe kuluhlu lwaseRussia lwamachiza ayimfuneko emva kokubonakalisa ukusebenza kwayo kunyango lwempilo ezahlukeneyo.
Oogqirha banikezela i-Semax njengechiza le-nootropic emva kokuqonda ukuba inokudlala indima ebalulekileyo ekuphuculeni ukusebenza kwememori kunye nokunciphisa uxinzelelo. Nangona iRussia neUkraine zikuvumile ukusetyenziswa kwesiyobisi, amanye amazwe anjenge-United States yaseMelika awasamkeli nangona zingqina ukuba zibalulekile kunyango lweemeko ezahlukeneyo zempilo. Nangona kunjalo, oko akukuthinteli ekusebenziseni i-Semax powder.
Ngaphandle komgubo weSemax oqhelekileyo, kukwakho ukwahluka okubini okufumanekayo kwintengiso, kodwa baphantse basebenze ngendlela efanayo. Babandakanya i-Na-Semax-Amidate kunye ne-N-Acetyl. Okwangoku, akukho sifundo sibanzi sele senziwe okanye sabhalwa malunga neinguqulelo ezimbini zeSemax. Nangona kunjalo, kuhlolo lweSemax, abanye abasebenzisi baxela ukuba i-Na-Semax-Amidate inamandla okuphucula ukugxila ngelixa i-N-Acetyl Semax inika amandla ngakumbi. Iziphumo zeSemax zinokwahluka ukusuka komnye umntu ukuya komnye, kuxhomekeke kwindlela umzimba uphendula ngayo kwidosi. Ukhululekile ukuba uzame naziphi na iinguqulelo zeSemax kodwa qiniseka ukuba ubandakanya ugqirha wakho kuyo yonke inkqubo yethamo.
The I-Semax powder iyafumaneka kwiivenkile ezahluka-hlukeneyo kwi-Intanethi nangokwaselwandle ezikungqongileyo apho unokwenza i-odolo yakho ngalo naliphi na ixesha. Fumana i-Semax yokuthengisa kwintengiso ethembekileyo kunye namava okanye umthengisi. Ayisiye wonke umthengisi weziyobisi onikezela iimveliso ezisemgangathweni, kwaye uhlala uluvo olulungileyo lokufunda abathengisi beSemax ngaphambi kokwenza iodolo yakho. Qonda ukuba ivenkile isebenza njani kwaye iyakuthatha ixesha elingakanani ngaphambi kokuba ufumane i-Semax (80714-61-0).
Kucetyiswa ukuba uye kuhlolo lwezonyango ngaphambi kokuba uqale uthathe eli chiza. I-Semax yentengiso sisiyobisi esikhutshwa ngugqirha, kwaye ke, ugqirha wakho kuya kuba ngumntu olungileyo ukuseta idosi efanelekileyo emva kokuvavanya imeko yakho. Inkqubo yonyango ikwafuneka ijongiwe yingcali yezempilo ngeziphumo ezingcono.
Xa uthenga iSemax (80714-61-0), gcina kude kubantwana ukufikelela kwaye kwifriji kuba inokuthoba njengezinye iipeptide. Ngcono, amava eSemax, qinisekisa ukuba ulandela yonke imiyalelo yedosos. Ungaze uhlengahlengise ithamo ngaphandle kokuba wazise ugqirha wakho.
Njengoko kutshiwo ngaphambili, iSemax peptide ibalulekile kwilizwe lezonyango, ngakumbi kunyango lweemeko ezahlukeneyo. E-Russia, iyeza lamkelwa emva kokuqonda ukuba linganceda ukulawula ukuphazamiseka kwegazi njengokubetha. Nangona kunjalo, izifundo zeSemax ezenziweyo kwiminyaka edlulileyo ziye zatyhilwa nezinye izifo elinokunyanga ngempumelelo iyeza.
Amazwe ahlukeneyo okanye oogqirha basebenzisa i-Semax ukunyanga iimeko ezahlukeneyo zempilo. Uxinzelelo lwe-Semax lufakwe ngaphakathi, kodwa ke kuphela amathontsi ayahluka ngokweemeko zempilo eziphantsi konyango. Kukwakho ne-Semax ye-injection enokuthi ilawulwe kuphela ngugqirha wezempilo. Soloko ukhumbula ukugcina ichiza kwifriji.
I-BDNF idlala indima ebalulekileyo ekusindeni kwe-neurons, kuphuhliso lwengqondo, kunye nakwiplasitic ye-synapses. Amanqanaba asezantsi e-BDNF anokukhokelela kuukudakumba uxinzelelo kunye noxinzelelo. Kuninzi njengoko kukubhengeza kwimiphumela emibi, I-Semax ikwabonakalise ukuba yi-BDFN yokuqaqambisa kunye nonganyangiyo. Ichiza linokuphucula ukwenziwa kwemveliso ye-BDNF ukuya kuthi ga kwi-800%.
Ngimpawu ezinxulumene ne-ADH, ixhala, kunye noxinzelelo. Ukunyuswa kwazo zonke ezi neurotransmitters kuqinisa inkuthazo, ngaloo ndlela kuphuculwe ukugxila kunye nemveliso.
I-Neototransmitters efana ne-enkephalins inefuthe lokuqonda, kwaye xa yonyuswe, idlala indima ebalulekileyo ekwenzeni iinkumbulo kunye nokulawula imvakalelo. Uphando olwenziwe eRashiya, lwabasebenzi abasempilweni, I-Semax powder baphucule ingqalelo yabo kunye nokugcinwa kwememori. Izifundo zesayensi zibonisa ukuba ukukhuthaza ukuhamba kwegazi okufanelekileyo kunye nokukhuseleka kwe-oxidative kwingqondo yomntu kuphucula inkumbulo.
Ukunyuka kwamanqanaba e-BDNF kwi-hippocampus kukwabalulekile ekuphuculeni inkumbulo kuba iHippocampus iziko lobuchopho kwimvakalelo kunye nenkumbulo. Kwelinye icala, i-BDNF ikwanceda ukukhulisa ukukhumbula, inkumbulo, kunye nokukwazi ukufunda kunye nokugcina ulwazi olutsha. I-BDNF ivuselela ukuveliswa kweNeurogeneis, sisizukulwana seendlela zemithambozo ebuchotsheni ezinceda ekuphuculeni ukusebenza kwengqondo kunye nokusebenza.
Ngokwesayensi, i-BDNF ziiproteni ezikhuthaza impilo yengqondo iphela nokukhusela kunye nokuqinisa iiseli zakho zengqondo, ukukhuthaza ukukhula kweeseli zengqondo, kunye nokukhuthaza ukungasebenzi kakuhle kwengqondo. Ngokwesiqhelo, nayiphi na i-nootropic eyonyusa amanqanaba e-BDNF inyusa ukuqondwa kwabasebenzisi abaninzi, kwaye i-Semax ibonakalise ukuba ngumzekelo ogqibeleleyo wesongezelelo sokomeleza iBDNF.
Ngamanye amaxesha, i-Semax stack isetyenziselwa ukuphucula imo kunye nesiyobisi esihlaziyayo. Kungenxa yokuba yonyusa imisebenzi ye-dopamine kunye ne-serotonin emzimbeni wakho, ii-neurotransmitters ezinefuthe elibalulekileyo kuxinzelelo noxinzelelo. Kwiminyaka edlulileyo, i-medics iqhubekile nokufumana iimeko ezahlukeneyo zempilo ezinokuthi ziqwalaselwe yi-Semax.
Umthamo we-Semax uxhomekeke kwimeko yezempilo phantsi konyango, kwaye idosi kufuneka isethwe ngugqirha. Kucetyisiwe Umthamo wesemax ukusuka kwi300mcg ukuya kwi-600mcg. Nangona kunjalo, abasebenzisi abatsha bacetyiswa ukuba baqale ngeedosi ezisezantsi, ezinokulungiswa kamva ngugqirha emva kokujonga impendulo yomzimba wakho kwichiza.
Ngamachiza, akukho mntu kufuneka abeke emngciphekweni ukuthatha umthamo omkhulu wesiqalo kuba oko kunokukhokelela kwiziphumo ezibi kakhulu. Ukuthintela nawuphi na umngcipheko onxulumene neli chiza njengeSemax yokulahleka kweenwele uhlala uluvo olulungileyo lokuya kuvavanyo lwezonyango ngaphambi kokuthatha eli chiza ngenxa yaso nasiphi na isizathu.
I-Semax ithathwa kakhulu kwi-intranasally, kwaye kuya kufuneka uthathe kuphela i-2 okanye i-3 yehla kancinci kwi-nostril kabini okanye kathathu ngosuku kumjikelezo obekwe ngugqirha wakho. Eminye imibandela enje ngokuthatha i-Semax yexesha lokubuyisela emva konyango, kuya kufuneka uthathe i-4 yehla ngamadolo amnyama, kathathu ngemini. Kwimemori ye-Post ye-narcosis okanye ukuphazamiseka kwengqwalaselo, ithamo elicetyiswayo li-3 lehla kwi-nasal nganye kathathu ngosuku. I-Semax yoxinzelelo i-2 ukuya kwi-3 yehla kwi-nasal nganye, kathathu ngemini yidosi ekhuthazwayo.
Nangona ku Inaliti yesemax Inika enye indlela efanelekileyo yokuthintela umthamo wempumlo, qinisekisa ukuba ufumana inaliti ugqirha wakho. Iimeko ezahlukeneyo zifuna ithamo eyahlukileyo. Uvavanyo kunyango luyakukhokhela amayeza akho ekumiseleni idosi elungileyo. Idosi ye-Semax kufuneka ibe phakathi kwe-300mcg ukuya kwi-600mcg.
I-dosage inokuncitshiswa ngakumbi ngokuxhomekeka kwindlela umzimba wakho uphendula ngayo kwi-Semax inal dosageor dosageor de uhlengahlengiswe ngaphezulu. Kwimeko apho ungaqinisekanga ngokuzitofa ngokwakho, ungacela ugqirha wakho ukuba akuqeqeshe okanye umisele utyelelo oluqhelekileyo lokuthatha umthamo wakho. Musa ukuzibeka emngciphekweni wokungazi ukuba ungayenza njani njengoko oko kungakhokelela kwezinye iingxaki zonyango.
Eli chiza libonakalise kwiimvavanyo ezahlukeneyo zonyango ebantwini, kwaye phantse zonke iimvavanyo azinangxelo zimbi zeSemax. Oko kwenza i-Semax yenye ye-nootropic ekhuselekileyo kwintengiso namhlanje. E-Russia, i-Semax ibe luncedo kunyango lweemeko ezahlukeneyo zonyango ezinjengeentloko ze-migraine, ukubetha, kunye nokuphazamiseka kwengqondo.
Ezinye iziphumo ebezingalindelekanga ezincinci zeSemax ziye zabikwa ngabasebenzisi abathile beSemax njengomlomo owomileyo, ukunyusa ukubila, isicaphucaphu, kunye nokudakumba. Ukulahleka kwethamo kunye nokulahleka kweenwele yenye enye yeziphumo ebezingalindelekanga ezichazwe ngabasebenzisi abathile beSemax. Zonke iziphumo ebezingalindelekanga azichazwanga, kodwa ii-medics zinokuzilawula. Imizimba yabantu yahlukile, kwaye ukuba kwenzeka ukuba uhlangane naziphi na ezinye iziphumo zeSemax ezinzima yazisa ugqirha wakho kwangoko ngoncedo.
Kucetyiswa ukuba uqwalasele ukubeka i-Semax kwi-Phenylpiracetam ngenxa yoxinzelelo lwamandla olunokubangelwa kukuthatha eli chiza ngesixhasi. I-Phenylpiracetam yeyona noopropic efanelekileyo yokuqaqambisa kodwa isebenza kancinci. Kwelinye icala, abasebenzisi abaninzi baye baxela ukufumana izibonelelo eziphambili zeSemax xa beyidibanisa nezinye izinto ezinokubakhuthaza ezifana ne-curcumin evumela ukuhamba kwamandla okungapheliyo emzimbeni.
La mayeza mabini ahlukile ngakumbi kwindlela asetyenziswa ngayo ukunyanga iingxaki ezahlukeneyo zempilo. I-Semax inamandla ngakumbi ekuphuculeni ukuqonda kunye nokudakumba, ngelixa uSelank ehambisa iziphumo ezisemgangathweni xa zisetyenziswa njenge-anti-ixhala. Nangona kunjalo, omabini la machiza anyusa amanqanaba e-BDNF, kwaye ngamanye amaxesha anokufakwa ndawonye, ​​njengoko bekutshiwo ngaphambili. Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-Semax vs Selank dibana neengcali kwezonyango.
Ukuba useRussia, iSemax ithengiswa phantsi komyalelo kagqirha. Nangona kunjalo, e-United States yaseMelika, ichiza alawulwa kancinci, nangona i-FDA ingazange ivume. Oko kuthetha ukuba unokufikelela kuyo ngokusebenzisa iivenotropic kwi-intanethi. Sisoloko sicebisa abasebenzisi beSemax ukuba balumke kakhulu kwaye bathathe ixesha labo ukuze bafumane abathengisi beSemax abalungileyo. Yenza uphando lwakho, jonga ukujonga kwabathengi ukuze uqonde indlela esebenza ngayo umthengisi we-Semax ngaphambi kokwenza iodolo yakho. Khumbula, ayinguye wonke umthengisi we-Semax osifumana kwimarike onokuthenjwa.
Iindaba ezimnandi kukuba singababoneleli abaphambili beSemax kwingingqi. Unokwenza i-odolo yakho kwiwebhusayithi yethu kwaye uqiniseke ukuba uyayifumana imveliso yakho ngexesha elifutshane kakhulu. I-Semax yentengiso kunye ne-Semax stack zonke ziyafumaneka kwivenkile yethu esebenziseka lula kwi-Intanethi.
Singabantu abanenkathalo Umthengisi wepoda yesemax, kwaye ke, silumkisa bonke abathengi bethu abanoxabiso ngokuthatha iziyobisi zethu ngaphandle kokwenza uvavanyo lonyango okanye ukubandakanya ingcali kwezonyango kumjikelo wethamo lonke. Kwakhona, yazisa ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba ufumana nayiphi na imiphumela emibi.
UDolotov, OV, Eremin, KO, Andreeva, LA, Novosadova, EV, Raevskii, KS, Myasoedov, NF, & Grivennikov, IA (2015). I-Semax ithintela ukusweleka kwe-tyrosine hydroxylase-neurons eyakhayo kwisisele esidityanisiweyo se-neuroglial cell esivela kwi-embryonic rat mesencephalon kwimodeli ye-6-hydroxydopamine-indened neurotoxicity. Ijenali ye-Neurochemical, 9(4), 295-298.
I-Koroleva, i-SV, kunye neMyasoedov, i-NF (2018). I-Semax njengeyeza eliHlangeneyo loNyango kunye noPhando. Ingcaciso ngebhayoloji, 45(6), 589-600.
Manchenko, DM, Glazova, N., Levitskaia, NG, Andreeva, LA, Kamenskiĭ, AA, kunye neMiasoedov, NF (2010). Iziphumo ze-Nootropic kunye ne-analgesic zeSemax ezilandela iindlela ezahlukeneyo zolawulo. Rossiiskii fiziologicheskii zhurnal imeni IM Sechenova, 96(10), 1014-1023.
Malyshev, AV, Razumkina, EV, Dubynin, VA, & Myasoedov, NF (2013, Meyi). I-Semax ilungisa ukungasebenzi kwengqondo okubangelwa kukuziswa kweprenatal yealbino acid. In IiSayensi zebhayiloji zaseDoklady (Umqu. 450, No. 1, iphe. 126). Isayensi yeSpringer kunye neMidiya yeShishini.